I-Instagram sele inosasazo ngqo olusebenzayo | Iindaba zeGajethi
I-Instagram sele inosasazo ngqo olusebenzayo
Phakathi enyangeni, amarhe malunga nokusebenza kosasazo ngqo nge-Instagram asungulwa kwinethiwekhi kwaye ngoku sinayo le nkonzo ifumanekayo kwinethiwekhi yoluntu. Rekhoda nangaliphi na ixesha kwaye nakweyiphi na imeko kunokwenzeka ukubulela kulo msebenzi mtsha nethemba lokulwa ngokuthe ngqo nePeriscope okanye iSnapchat xa kuziwa kusasazo ngqo.
Ukufika kwale nkonzo kudityanisiwe njengenketho ngaphakathi kwesicelo uqobo kwi rekhoda bukhoma kumabali e-Instagram, ukuyisebenzisa kulula kakhulu. Into ekufuneka siyikhumbule kukuba kule meko iividiyo ezikhoyo azirekhodwa, ziyacinywa nje ukuba kugqitywe bukhoma.
Oku kulungile xa sinengxaki okanye kwenzeka into engalindelekanga ebomini esingafuniyo ukuba irekhodwe, kodwa ayilunganga ukugcina imbali yeevidiyo nangona oku kungenjongo yesicelo. Ke kumnandi ukuyazi loo nto Iividiyo kumabali e-Instagram ziyanyamalala nje ukuba sigqibe ukusasaza ngqo.
Ukulandela usasazo ngqo lwabantu esilulandelayo kulula njengokubona ii icon kwi-Bali yamabali ephezulu okanye xa sicofa kwiglasi yokwenza into yokukhangela umntu. Ilebhile ephilayo ibonakala kwezi icon ukwazisa ukuba ngoku basasaza bukhoma kwaye sinokongeza izimvo okanye sinike ukuthanda kwethu ngaphandle kwengxaki. Inkonzo ebibonakala ngathi ifike kwiinyanga ezimbalwa isungulwe kule nyanga.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » software » I-Instagram sele inosasazo ngqo olusebenzayo
AbakwaNokia baya kuzisa i-smartphone kwi-Mobile World Congress 2017
Imeko yangoku kunye nezibonelelo zokuzenzekelayo ekhaya